ka ilaina ny hisian` ny dinika mba hisian` ny vahaolana mahakasika izany. Nanamafy ny tenany nanao hoe “miasa amin` ny tsy fitoviana ara-barotra izahay, ka lehibe ny tsy fitoviana ary miasa amin` izany izahay momba any fifampiraharaham-barotra. Ary ho azoko antoka fa hahita vahaolana izahay amin` ny fotoana iray”. Mbola tsy voafaritra kosa ny fifanarahana. Etsy ankilany, nilaza ihany koa ny Filoha Amierikanina fa ny Filoha Koreanina Tavaratra Kim Jong Un dia lehilahy tena mahay ary fetsy ka nahatsapa ny tenany fa ilaina ny fitaovam-piadiana nokleary mba hampandroso ny fireneny.